ပုလဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပုလဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ
Posted by manawphyulay on Sep 20, 2012 in Photography, Travel | 28 comments
ဒီလိုလေးတွေ ကျတော့လည်း လိုချင်မိသားနော်
အခုလိုဆိုတော့လဲ ဆေးကြောသန့်စင်မထားရင် ကြည့်စရာတောင်မကောင်းဘူးပဲ…
ပုလဲလုံးလေးနဲ့တူတဲ့ မိန်းကလေးလို့ပြောရင်နာဘီဘဲ … :buu:
ခုလို ပုံလေးတွေနဲ့ မြင်ရလို့ ဗဟုသုတလေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် …
မနောရေ အမတို့ဆီက ပုလဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းက ဂျပန်တွေ လာပြီး နည်းပေး မျိုးစေ့ထားပေးခဲ့တာလို့ ပြောတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းက ပထ၀ီသင်တဲ့ ဆရာက ပြောပြတာ။
အလှဆင်တဲ့ ရတနာအနေနဲ့ကတော့ ပုလဲက လူရွေးပါတယ်။ လူတိုင်းနဲ့ မလိုက်ဖက်တတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မြင်မိသလောက် ကိုယ့်အထင်ပါ။ လိုက်တဲ့သူတွေကျတော့ တော်တော်လေးကို လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသားအရေ မျက်နှာအရောင်ကို လိုက်ပြီး ပုလဲ အရောင် ရွေးတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အရောင်မလိုက်ရင် မျက်နှာပါ မဲသွားတတ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ပုလဲ ချည်းပဲ အလုံးလိုက် သီးသန့်ဆွဲတဲ့ လည်ဆွဲမျိုးကို ပြောတာပါ။ သူ့ကို တခြား စိန် ရံပြီး အနေတော် အလှဆင်တာမျိုး ဆိုရင် တော့ လူတိုင်းနဲ့ လိုက်တတ်ပါတယ်။
မွေးပုလဲတွေကိုး …. ဒွတ်ခ .. ဒွတ်ခ … ဖြစ်ရာဘွမှာ .. မုတ်ကောင်လေး မဖြစ်ပါရစေနဲ့ …..
ခင်မောင်တိုးကတော့ သူ့နာမယ်ကျော် မျက်သွယ် သီချင်းထဲမှာ ဒီလိုဆိုသွားဘူးတယ်။
လေးလေး တစ်ကုံးလောက် ၀ယ်ပေးပါလား ဟင်…
မူရင်းက.. ကဗျာဖြစ်ပြီး.. မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရေးတာလို့မှတ်မိတယ်..။
အခု..ယူအက်စ်က ကွန်ဂရက်ဆုယူပွဲမှာတော့. ဒေါ်စုရော.. ဒေါ်နန်စီရော.. ပုလဲပုတီး.. ဆွဲထားကြတယ်တွေ့ရတယ်..။
. ဒေါ်စုပုလဲက.. မြန်မာ့မွေးပုလဲများလားတော့မသိ..။
ကြည့်ရတာ ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့နည်းပညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း အရည်သွေးကွဲမလားသိဘူးနော
အကြမ်းထည်အဆင့်မှာ ပစ္စည်းအပေါ် သိပ်ဂရုစိုက်ကြပုံမရဘူး
ကမာကောင်လေးတွေ ဘဝက သနားစရာနော်..
….ကမာကောင်လေးတွေက သနားစရာပါ…ပုလဲကျွန်းမှာ ဟိုဂျပန်ကြီး
ရေထဲကဆယ်ပြီး ကမာကောင်ကို ချက်ချင်းခွဲပြီး ပုလဲထုတ်ပြတော့ သူ့ဘ၀က
အသက်ငင်နေသလို အရည်အကျိတွေက တွန့်လိမ်ပြီး မြင်ရတာ မသက်သာဘူး…
သနားလိုက်တာ…. သူတို့ဘ၀က ရင်ထဲ၊နှလုံးသားထဲက အသွေး၊အသက်တွေနဲ့
ရင်းထားရတာ ဇီဝဇိုးငှက်လေးတွေနဲ့ ဆင်သလိုပဲ….
客家人作品 ဆိုပဲ ..
ကိုပု ပြောသွားတာကို ထောက်ခံပါရဲ့ဗျာ..
အနှီ ဖောက်သီတဲ့ ပုလဲပုတီးတွေ ပြောပါတယ်..
စိန်နဲ့ ရံမယ့် မွေးပုလဲ အကောင်းစားတွေဆိုတာ
မုတ်ကောင် တကောင်ချင်းစီကနေ တလုံးဆိုတလုံး
ဇာဂနာနဲ့ ညှပ်ယူပြီး ရေထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်လေးထဲထည့်လို့
အကျအန သန့်စင်တာ တွေ့ဖူးရဲ့ … သည်လိုမျိုး
ပုလဲမှာ ပြောစမှတ် တခုရှိတာ အစစ်လှလွန်းရင်
အတုနဲ့ တူသလို အတု လှလွန်းရင်လည်း အစစ်လိုပဲတဲ့
I think this is freshwater pearl.
I think this is freshwater pearl not south sea pearl.
ပုလဲတွေကို ဘယ်လိုမှမကြိုက်ဘူး …. လှတယ်လို့လဲမထင်မိဘူး …… သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ဖြစ်လို့ ပိုလို့တောင် မနှစ်သက်ဘူး ……. အော် ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ ….
န၀ရတ်-၉ ပါးမှာ ပါတဲ့
ပတ္တမြား ဘုန်တောက်၊ မြ ကျောက် အေးချမ်း
စိန် စွမ်းဂုဏ်ရောင်၊ ကြောင် ကား သိဒ္ဓိ
မဏိ နီလာ – မေတ္တာကဲချုပ်၊ ဂေါ်မိတ် ခွန်အား
ဥဿဖယား ကျန်းမာ၊ သန္တာ ကြီးကဲ
ပုလဲ ကျက်သရေ၊ ဂုဏ်ကိုးဝေသည်
ကိုးထွေ န၀ရတ် စွမ်းရည်တည်း။
ဒါက ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်း ရဲ့ အလိုပါ..
ထားပါ အဲ့ဒါတွေ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး
အဲ့သည့် ၉မျိုးထဲမှာ ပုလဲ တစ်ခုပဲ
တွင်းထွက်မဟုတ်တာ (ထုတ်လုပ်လို့ရတာ) ဗျို့…
ဒါပေမဲ့ အစစ်အတုဆိုပြီး ဈေးပြန်ကွာပြန်ရော။ ရေထွက် အစစ်ဆို ပါးမှာ ကပ်လိုက်တာနဲ့ အေးပြီး ကိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။
လုပ်ယူထားတာကျတော့ ပါးမှာကပ်ရင် အအေးဓာတ်မရှိဘူး။ ကိုက်ရင် ဒဏ်မခံပြန်ဘူး။ သူများတွေ စမ်းတာ တွေ့ဖူးတာပါ။
ပုလဲမှာ မွေးပုလဲနဲ့ သဘာဝပုလဲ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
မွေးပုလဲက အရွယ်အစားငယ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပါတယ်။
ပုလဲကျွန်းမှာ ၂နှစ်လောက် နေဘူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပုလဲဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ သေသေချာချာ ရှင်းမပြတတ်ဘူး။
ပုလဲဝတ်ဆံသွင်းတာ၊ ပုလဲဖော်ပြီး ထုတ်ယူတာအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
၁၀ နှစ်လောက်ကြာသွားပြီမို့ ပုံတွေပြန်ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
ပုလဲကျွန်းမှာ အရင်က ဂျပန်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်သေးတယ်မလား… အဲမှာလိုပဲ ရခိုင်ဘက်က လုံးသာရွာဘက်ကမ်း အပေါ်ယံကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ ပုလဲကျွန်းမှာတော့ မွေးပုလဲတွေဖော်လို့ ကိုက် ၅၀၀ အတွင်း အပြင်လူမ၀င်လို့ စည်းကမ်းချထားတယ်။ အဲမှာလည်း အတော်ကို မွေးမြူကြတယ်နော်။
အစိုးရပိုင်မွေးမြူရေးနဲ့ ပြည်တွင်းဖက်စပ်လုပ်ငန်း ၂ခုရှိတယ်။
ဒုံးပုလဲအော်ကျွန်းမှာ သြစတေးလျှနဲ့ ဖက်စပ်ရှိတယ်။
လုံးသာ(အပေါ်ရည်ကျွန်း)ကိုတော့ မရောက်ခဲ့လို့ မသိဘူး။
ဟုတ်ပမခိုင်ခိုင်ရေ ပုလဲကိုသဘောကျပေမယ့် သက်ရှိကဖြစ်တည်တာမို့ မနှစ်သက်ပါဘူး။
မ မနော ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ပုလဲဖြစ်လာပုံလုပ်ငန်းခွင်လေးကိုမြင်ရလို့..။
.. ♫ .. ♪ .. ဖြူဖြူစင်စင် .. ♫ .. ♪ .. ပုလဲလေးတွေကိုမှ .. ♫ .. ♪ .. ချစ်တယ်လို့ သူက ဆိုလာစဉ် .. ♫ .. ♪ ..
ပုလဲလေးတွေ ဆိုတာ .. ♫ .. ♪ .. ကမာကောင် လေးတွေရဲ့ .. ♫ .. ♪ .. မျက်ရည်ပဲ ခင် .. .. ♫ .. ♪ ..
ဘာမှ ဟုတ်ဘူး ..
ခင်မောင်တိုး သီချင်း ဆိုကြည့်ဒါ ..
လူတွေများလဲနော် သူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျ အနေအစားဆင်းရဲ အသက်ပါဆုံးပြီးမှရတဲ့ ပစ္စည်းကို ရတနာဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝတ်ဆင်နေကြသေးတယ် ဘလတ်ဒီဖူး
ကမ်းခြေတွေမှာ ပုလဲတွေ ရောင်းတယ်.. ခပ်တည်တည် နဲ့ အစစ်လိုလို ဘာလိုလို ရောင်းကြတယ်.. အဲဒီ ဈေးသည်တွေဆီက ပြန်ကြားတာ.. ဗိုလ်ချုပ်ပေးက ပြန်ပို့တာတဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ကို ဘယ်က လာလဲ ဆိုတော့ တရုတ်ပြည်က.. တရုတ်ပြည်က အတုတွေက မသိရင် အစစ်လိုလို ဘာလိုလို နဲ့ မီးခြစ် နဲ့ စမ်းတဲ့ သူက စမ်း အဲလို စမ်းလို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. ငါးကြေးခွံကို ကြိတ်ပြီး ပုလဲ ပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ ဆိုပဲ.. ကြီးချင်သလောက် ကြီးကြီး ရအောင် လုပ်နိုင်တယ် ပြောတယ်။ ပုလဲ က အလုံးသေးပေမဲ့ အနှစ် ရှိတော့ အလေးချိန်စေးတယ်။
မုတ်ကောင်ခွံတွေ အပုံလိုက် အများကြီးတွေ့ရတာ
ဖြူဖြူစင်စင် ပုလဲလေးတွေကိုမှ ချစ်တယ်လို့ သူကဆိုလာစဉ်
ဒါကြောင့်သာပင် လည်မှာဆွဲစမ်းပါနဲ့ခင် ….. တဲ့
သူများလှဖို့ သူတို့မှာ ရင်ခွဲခံ၇တယ်
အရင်က “ပုလဲလေးတွေဆိုတာ ကမာကောင်လေးတွေရဲ့မျက်ရည်” လို့သိခဲ့ပေမယ့် အမှတ်တမဲ့ပါ
ခုလို မြင်လိုက်ရတော့ မျက်ရည်တင်မကပါဘူး နှလုံးသွေးရော အသားရော အကုန်နာကြရှာမှာ…
ဒါပေမဲ့ ကမာကောင်လေးတွေကို အရှင်လတ်လတ်ရင်ကိုခွဲပြီး ထုတ်ယူနေတာတွေ့တော့
ကျေးဇူးပါမနောရေ .. အခုလို ပုလဲထုတ်လုပ်တာလေးတွေကို ပြောပြပေးလို့…